🥇 ▷ Tilmaamo cusub oo ku saabsan Xiaomi taleefanka gacanta isku laabma ✅
Tilmaamo cusub oo ku saabsan Xiaomi taleefanka gacanta isku laabma
Samsung waxay horeyba u haysataa taleefanka gacanka ee loo yaqaan ‘Galaxy Fold’ iyo Huawei waxay soo bandhigtay Huawei Mate X inta lagu gudajiray Shirweynihii Mobile World Congress. Laakiin waxaa jira magacyo kale oo badan oo iyagu horeyba uga shaqeynayay iyaga. Shalay waxaan aragnay qaar ka mid ah aaladaha taleefanka gacanta ee LG laabana maantana waxaan ognahay faahfaahin dheeraad ah oo taleefanka gacanta isku laabma ee Xiaomi, hadda oo leh faahfaahin cusub.
Xiaomi ayaa muddo bilooyin ah sheeganeysay inay mar hore billowday moobilkeeda isku laabma, in kasta oo ayan faahfaahin badan ka bixin arrintaas. Dhowr daadis waxaan awoodnay inaan ku aragno taleefankan Xiaomi ee laabanaya gacanta maamulayaasha sumadaha laakiin shirkaddu weligeed ma bixin macluumaad ku saabsan sida ay noqon doonto ama waxa astaamihiisu yihiin.
A patent ayaa hadda laga xareeyay Xafiiska Hanti-dhowrka Macluumaadka ee Midowga Yurub (EUIPO) wuxuuna shaaca ka qaadaa dhowr waji oo naqshadeyn ah dhammaan xaglaha, kana baxsan astaamaha qaarkood ee taleefanka sida kamaradiisa.
Patent wuxuu xaqiijinayaa taleefanka gacanta Shaashad weyn markii la geeyay. Markii la isku laabto waxay ku xirmi doontaa labada dhinac iyadoo leh gabi ahaanba naqshad ka duwan tan aan hadda soo aragnay. Shaashadda weyn waxay noqon doontaa nooc albaabo leh laba gees oo dhinacyada ka mid ah. Marka taleefanka la duubto waxay noqon laheyd sida aan ku aragno sawirka oo kaamirada ay u muuqan karto la istcimaali karo, oo ku taal bartamaha gadaasha.
Laba isqabqabsi oo ballaaran ayaa u oggolaanaya isku laabid Taleefanka ayaa si fudud waxyeello la’aan ah. Marka loo isticmaalo qaab isku laabma, sidaan ku aragno sawirrada, waxaa jiri doona shaashad caadi ah iyo labo shaashad oo yaryar oo dhabarka ah. Iyo kaameeraha qeybta dhexe oo xor u ahaan kara isticmaalidda xaalad kasta haddii loo baahdo.
Waayo hadda garan mayno waxa ay dareemayaashu ahaan doonaan laakiin laakiin haa waxay noqon doontaa kamarad saddex-geesood leh saddex dareemayaal meeleeya, sida mobilada ugu dambeeyay ee shirkadda. Wixii ka dambeeya naqshadeeda garan mayno muuqaalka ama awooda ay ku jiri doonto inkasta oo ay u muuqato in ayan qaadan doonin muddo dheer in laga baxo shaki.
Goorma ayey imaan doontaa?
Xiaomi wuxuu ka shaqeeyaa taleefankan moobaylka laakiin garan mayno goorta si rasmi ah loogu soo bandhigi doono. Samsung iyo Huawei waxay horeyba u sameeyeen taleefannadooda kuwo shacabka ah laakiin aan wali la bilaabin waxayna u muuqataa in Xiaomi ay rabto inay sugto, isku daydo oo aragto soo dhaweyntooda kahor inta aysan ku garaacin taleefanka gacmeed.
Dhanka magaca, ilaa iyo hada majiro wax la xaqiijiyey laakiin wax walboo muujinaya in Xiaomi taleefanka gacanka isku laabma loo magacaabi karo Xiaomi Mix Flex ama Xiaomi Dual Flex.